IINGCAMANGO ZEPEYINTI YOMNTU - UKUHOMBISA
Eyona Ukuhombisa Iingcamango zePeyinti yoMntu
Apha sabelana ngezinye zeyona ndoda ibalaseleyo yemiqolomba yepeyinti yokukunceda wenze i-vibe efanelekileyo yokubaleka kwekhaya lakho.
Umbala wenza wonke umahluko ngokweeesthetics ezibonakalayo zesithuba.Banceda ukungenisa isimilo, benze imood okanye bavuse intsingiselo ngaphakathi kwekhaya. Ke ngoku, zichaphazela indlela esivakalelwa ngayo kwindawo. Ke, ukukhetha umbala ofanelekileyo ukuba ulawule iindawo zethu zokuhlala, nokuba ligumbi lokulala, igumbi lokuhlala okanye umqolomba wendoda akufuneki uthathwe kancinci.
Iimarike azibonisi kuphela amakhulu kodwa amawaka emibala yepeyinti onokukhetha kuyo. Thatha isigqibo ngomthunzi ofanelekileyo wepeyinti ukunika indoda yakho umqolomba kunokuba nzima, kodwa ngolwalathiso olufanelekileyo, ukwenza ukhetho olufanelekileyo kulula.
Apha ngezantsi sikunika isikhokelo sezona mbono zipeyinti zibalaseleyo onokuzihlola ukwenza umqolomba ogqibeleleyo wendoda yamaphupha akho. (Ukufumana ezinye izimvo zomqolomba womntu jonga igalari yethu)
Eyona mibala mihle yokupeyinta uMqolomba woMntu
Rhoqo, izikimu zemibala yemiqolomba yamadoda zihlala zihamba nemibala yobudoda efana nokungathathi cala njengombala omdaka, ongwevu, omnyama okanye ii-aksenti ezinje ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka okanye oluhlaza. Ngokubanzi, le mibala iphakamisa umlinganiswa owomeleleyo, ngaphandle kokuba ingoyiki kakhulu xa isetyenziswa njengendoda yokupenda umbala wendawo.
Nantsi eminye imibala epeyintiweyo onokuyisebenzisa xa uyila umqolomba wendoda:
Iimpawu zeGrey -Ngaphandle kokuba yenye yezona zinto zihamba phambili kulo nyaka, umbala ongwevu ujongwa njengokhetho lwakudala lwemiqolomba yamadoda. Abanini bamakhaya abaninzi kunye nabayili bayatsaleleka kumandla azolileyo aziswa zizikhala ezingwevu kwiindawo. Ngaphandle kokuba ne-vibe ethambileyo, ecekeceke, i-shades ezingwevu ziyakwazi ukwenza ingxelo kwigumbi. Ukuzinza kwayo kunye namandla kuyenza ukuba ibe lukhetho olufanelekileyo kumbala womqolomba womntu.
Umbala ongwevu ujongwa njengongathathi cala kwindawo yoyilo lwangaphakathi, uhlala uthatha indawo yabamhlophe abamnyama okanye abamnyama. Ukuba uziva ukuba ukuhamba neendonga ezimhlophe emqolombeni womntu wakho kucace gca okanye buthuntu, kodwa usafuna ukuba bhetyebhetye ekunikezelayo, oko kunokuba ngumbala ofanelekileyo kuwe. Imibala engwevu yabelana ngeempawu ezifanayo ezenza mhlophe ukuba bhetyebhetye, kodwa inombala ongaphantsi kakhulu. Nangona i-shades ezikhanyayo ezingwevu zingenawo amandla okwenza ukuba amagumbi abonakale ekhanya ngakumbi okanye engaphezulu komoya, abavelisi abaliqela bepeyinti banikezela oku kungathathi cala kwimibala epholileyo enokunceda ukudala umoya ococekileyo ngakumbi.
Njengoko sele kukhankanyiwe, iigreyim ezingwevu zikwabonelela ngokungathathi cala, nto leyo eyenza ukuba isebenziseke ngokwendlela yoyilo. Iindonga ezikwi-shades ezingwevu zinokuba ngumqolo ongasemva wokwazisa imibala kwindawo, nokuba iyaphola okanye ishushu. Ukongeza, iigrey shades ezingwevu zinokusetyenziswa ngokukuko nangasiphi na isitayile somqolomba wendoda yakho, nokuba ingaba yindawo yesiqhelo yemveli okanye indawo yokuhlala engaqhelekanga. Ubuqhetseba kukuba ukhethe i-tonality efanelekileyo eya kuthi ikuncede uvuse imeko yomqolomba wendoda yakho.
Lo mbala wemoody wenza ukhetho olugqwesileyo kwimiqolomba yamadoda efana nesifundo, ilayibrari okanye iofisi yasekhaya. Iimpawu zalo ezingaphantsi ezithulisiweyo zibonisa zombini ubuvila kunye nokuphelelwa lixesha, okufanelekileyo kakhulu emqolombeni wendoda.
Kukho imibala emininzi engwevu enokuphononongwa njengombala wepeyinti yendoda, kwaye yonke imibala yayo nokuba kukukhanya, phakathi okanye kumnyama kungqina ukuba lukhetho olufanelekileyo. Iimpawu ezilula ezinje ngegrisi okanye iigrey ezipholileyo zinceda ukudala indawo yokuphumla nokuzola, ngelixa i-shades efudumeleyo enje nge-slate grays, i-ash grey, i-charcoal, i-graphite, i-grey yomsi, i-pebble kunye ne-iron konke kunceda ukuseta imeko yendawo ebalaseleyo.
iyaphi iringi yomtshato
Emnyama mdaka -Iitoni zomhlaba kunye nomdaka yiminye imibala esikhumbuza ngokungaphandle kunye nendalo. Eyona nto intle malunga ne-brown brown, ngokubanzi, kukuba yongeza ubushushu kunye nokuqina kwendalo kwisithuba. Yenza ukhetho olufanelekileyo kwimiqolomba yomntu kuba yomelele, ikhaliphile kwaye inesibindi.
Umdaka omnyama nawo usebenza kakuhle ekwenzeni izikimu ze-monochromatic. Ukuncamathisela kumbala omnye kumqolomba wakho wendoda kunceda ukuvelisa ukujonga okuhlangeneyo ngokudibeneyo ngaphakathi kwakho. Nangona kunjalo, ukunamathela kumbala omnye akuthethi ukuba kuya kufuneka uphinde umthunzi omnyama omdaka ngokugqithileyo kuko konke ukugqitywa komqolomba wakho.
I-brown emdaka ikwangoyena mntu ungcono ekuncediseni kwizandi zomthi kunye nelitye lendalo njengoko ivelisa umoya ofana nowasekhaya kunye nemvakalelo yokumema. Iiphalethi zomntu omnyama omdaka ngombala nazo zilula ukuhlala nazo, ngakumbi xa zidityaniswe nemibala echanekileyo. Umdaka okhanyayo -Ungayilungelelanisa ne-lint tint efana nokukhanya kwe-mocha, isanti e-tan, ithoni e-mellow enje ngombala omdaka wekhofi okanye umthunzi omnyama njenge-brown chocolate ukuvelisa umbala ocacileyo. Ukwenza iskimu sombala esisebenzayo se-monochromatic emqolombeni womntu usebenzisa umbala omdaka, qiniseka ukudibanisa ubungakanani obufanelekileyo bombala ukuze kuveliswe, ubunzulu, umahluko kunye nokuthelekisa kwi-aesthetics ebonakalayo yendawo.
Mnyama -Mnyama ibisoloko ingumbala oqhubekayo ngokuqhubekayo kwimiqolomba yamadoda. Uninzi lwamadoda litsaleleke kumbala walo ongqindilili onika ubukho obomeleleyo kwisithuba. Ngaphandle kokungaqondakali, umnyama ubukeka buhle, ubugqithisile kwaye unobudoda obalaseleyo kuwo.
Njengazo zonke ezinye izinto ezingathathi hlangothi ezinje ngwevu nomhlophe, umnyama ubonelela ngokuguquguquka ngokoyilo, kodwa unobuntu obungqongqo. Kungumthunzi ogqibeleleyo wokudala umahluko kwaye unokudityaniswa phantse nawo nawuphi na umbala ogqamileyo. Ezona zilungileyo zibhangqwe ziindonga ezimnyama ziingqombela ezibomvu, okomthubi oqaqambileyo, umbala oluhlaza kunye neblues enzulu. Enye indibaniselwano yeklasikhi imnyama nomhlophe, eyintandokazi ebantwini emiqolombeni.
Umama womtshakazi unxiba isimilo
Umnyama usetyenziselwa kakuhle imiqolomba yabantu ebanzi. Xa isetyenziselwa iindawo ezincinci, inomdla wokwenza ukuba uzive uxinekile okanye unzima kakhulu. Olu lukhetho olufanelekileyo kwimingxunya yamadoda ejolise ekukhuthazeni imeko emnyama enje ngemivalo yasekhaya, amagumbi evidiyo okanye iithiyetha zasekhaya.
Ngokuchasene nenkolelo yokuba ayinakusetyenziselwa igumbi lonke, emnyama inokusetyenziselwa zonke iindonga ezine zomqolomba wendoda, ngaphandle kokuba ixhaswe kukukhanya okufanelekileyo kunye nokulinganisa izinto zoyilo ezinje ngeesofa ezinemibala ekhanyayo okanye izixhobo Ukwenza indawo ephucukileyo.
Inavy Blue -Ukuba kufikwa kumbala, olona khetho luthandwayo emadodeni luhlaza okwesibhakabhaka, kuba xa uhlala uludibanisa nobudoda. Nangona kunjalo, ayizizo zonke izithunzi eziluhlaza ezisebenzela umqolomba wendoda. Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka awufiki kwi-hue enye kodwa endaweni yoko unamakhulu eetintshi kunye nee-shades, ezisusela kobo bukhaphukhaphu khaphukhaphu ukuya kwi-cobalt etyebileyo, ii-navies ezimnyama okanye i-grey eblue. Ezo ziwela phakathi ukuya esiphelweni esimnyama sebala zisebenza kakuhle kwimiqolomba yomntu.
Owona mthunzi uluhlaza okwesibhakabhaka ofanelekileyo kumqolomba wendoda yiBlue Blue. Kucingelwa ukuba yenye yezona zimnyama ziluhlaza okwesibhakabhaka (phantse inombala omnyama), i-navy blue yenye yezona zinto zihamba phambili kuyilo lwangaphakathi kule mihla. Nangona i-navy blue ingumbala omnyama, inokusinika amandla isithuba, ngelixa siyinika lo mlinganiswa wobudoda ufuna umqolomba wendoda. Umbala we-navy blue ubonakalisa ubukho obuqinileyo egumbini, kodwa ikwanakho ukuvelisa imeko ezolisayo. Ngokubanzi, iziphumo zayo yindawo enkulu kodwa eyindoda.
Umbala ohlaza okwesibhakabhaka wasemanzini ukwabonelela ngokuguquguquka kunye nokuguquguquka ngokubhekisele kokuxuba kunye nokuhombisa okuhambelana kwindawo. Njengeebhulukhwe ezithembakeleyo zeebhulukhwe, umbala o-navy oluhlaza okwesibhakabhaka ubonisa umva ogqibeleleyo wayo nayiphi na indlela yomqolomba wendoda, umxholo kunye nenkuthazo. Nangona isenokungabi bhetyebhetye ngokungathathi hlangothi njengegrey okanye abamhlophe, ipeyinti eluhlaza okwesibhakabhaka isebenza kakuhle ngezikimu ezininzi zemibala. Ukongeza, inokusetyenziselwa iintlobo ezahlukeneyo zoyilo, nokuba ziqhelekileyo okanye azikho sesikweni.
Ubunzulu be-navy blue bunokuba yinto encinci kwabanye, kodwa ngokugqibezela ngokuchanekileyo, izixhobo kunye neefenitshala zokuyizalisa, uyakufumana uyilo olumangalisayo lomqolomba wendoda enembonakalo elungeleleneyo ngokupheleleyo. Ukwenza ithoni phantsi kweendonga ze-navy eziluhlaza, qiniseka ukuba ubhangqwe ngee-shades ezingwevu.
Umbala ohlaza okwesibhakabhaka wasemanzini unokusetyenziswa njengepeyinti eludongeni olusisigxina, kodwa unokusetyenziswa ngokukhululekileyo kwigumbi lonke. Nangona kunjalo, ayinakusebenzela indawo encinci yomqolomba womntu kuba inzima, i-hue emnyama inokwenza igumbi liziva lincinci. Ukuphonononga i-navy eluhlaza okwesibhakabhaka njenge-accents nayo ihlala ifumana iziphumo ezingcono, xa kuthelekiswa negumbi elipheleleyo ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ke qiniseka ukwazisa omnye umbala kumqolomba wendoda yakho kunokuba ugcine iskim se-monochromatic.
Unokuphinda ujonge ezinye tonalities zombala oluhlaza okwesibhakabhaka ukuba i-navy blue ayihambelani nencasa yakho. Olunye uhlobo lokwahluka kwe-navy blue luhlaza okwesibhakabhaka, ongwevu oluhlaza okwesibhakabhaka, phakathi kobusuku luhlaza okwesibhakabhaka, i-oxford eluhlaza okwesibhakabhaka, icobalt kunye ne-Persian blue
Imifuno enzulu -Kalabo bafuna ukukhazimla kombala kodwa abafuni ukuzibophelela kwimibala eqaqambileyo, eqaqambileyo, emva koko imifuno enzulu ngumbala ofanelekileyo womqolomba wakho. Umqolomba wendoda, ekubeni yindawo yokubuyela umva inokusebenzisa umbala ofanelekileyo onokubeka imeko yokuphumla ekhuthaza ukuphumla kunye nokuchasana neentshukumo ezimbi zosuku olude, olunoxinzelelo emsebenzini. Luhlaza ngumbala wokuphilisa kunye nokukhula, okwenza ukuba ibe lukhetho olufanelekileyo kumqolomba wendoda ozolisayo.
Uluhlaza nzulu ikwangumbala wendalo ke ngoko icwangcisa ubungqangi bendalo. Uphefumlelwe zizityalo kunye nemithi, uluhlaza omnyama ugqibelele kubathandi bangaphandle kunye nabo bafuna ukukhunjuzwa ngezinto ezonwabisayo ngelixa ulandela okanye uthomalalisa ukubuyela umva entabeni. Ayilungelanga kuphela imiqolomba yamadoda angaphandle, kodwa ikwenzelwe nalawo acebisa imeko emiselweyo, enje ngesifundo okanye iofisi yasekhaya.
Imifuno emnyama inokuphononongwa njengombala oqaqambileyo kwaye idibene kakuhle nezinye izinto zendalo ezinje ngomthi oqinileyo kunye nelitye lendalo. Ungayifanisa neendawo zokucima amatye, imigangatho eqinileyo yomthi kunye nemiqadi yophahla.
Kulabo bafuna ukusebenzisa umbala otyebileyo, unokukhetha ezinye iithunzi eziluhlaza ezithe cwaka kwaye zathotywa. Olunye uluhlaza olulungele ukupeyinta umqolomba womntu luhlaza moss, luhlaza okwesilumko kunye nozingelayo oluhlaza.
Burgundy ebomvu neTyebileyo -Omnye umntu ongumqolomba wokukhetha ipeyinti kwabo bafuna ukuphambuka kokungathathi cala yimibala ebomvu. Olunye ukhetho oludumileyo yi-burgundy etyebileyo. Ukuba yeyosapho lombala obomvu, i-burgundy etyebileyo inakho ukomeleza igumbi, kodwa xa kuthelekiswa noogxa bayo abadlamkileyo, ibonelela ngendawo esesikweni ngakumbi neyokuthotywa.
Ukusebenzisa obomvu oqaqambileyo ezindongeni kungothusa kakhulu kodwa ukuyixuba ngesandi esiphantsi esimnyama ukwenza umbala otyebileyo we-burgundy kudala indawo ethe chatha ukuchitha ixesha kuyo. IBurgundy ikwangumbala ogcwele amandla kwaye nangona usemthethweni. ayilulo ukhetho olukruqulayo ngombala.
I-burgundy etyebileyo lukhetho olufanelekileyo kumqolomba wendoda onobunewunewu obuphucukileyo banamhlanje, njengoko izisa ubuhle obungaqhelekanga. Ifanele ngakumbi imiqolomba yamadoda esesikweni enelayibrari yokuziva, yokufunda okanye iofisi yasekhaya. Isebenza ngokukuko kwiindlela ezininzi zesiko.
isicakazana esifutshane selokhwe zokuhlonipha
Ukuthintela ukwenza ukuba umqolomba wakho ube nzima kakhulu emehlweni, zama ukudibanisa iindonga ze-burgundy ezinzulu ngombala wokulinganisa onje nge-beige, grays, taupe okanye greiges. Endaweni yokuyisebenzisa iphelele emqolombeni wendoda, zama ukufaka umbala eludongeni kunye nayo ukuze unike ingxelo ebhaliweyo kwisithuba.
Igraige -Umdibaniso wemibala engwevu kunye ne-beige, i-grey ilungelelanisa kakuhle kulo naluphi na uhlobo lwesikimu sombala womqolomba womntu. I-Greige ibonelela ngokuguquguquka njengoko inokuthi ilungelelaniswe kwiithoni ezahlukeneyo kunye namaxabiso-isixa se-grey tint kumbala we-greige sinokuhlengahlengiswa kumanqanaba ahlukeneyo ukwenzela ukuba shushu okanye singathathi cala. Ke ngoko iyasebenza, inokudityaniswa nayo nayiphi na imibala yentsingiselo.
Kuxhomekeka kubuninzi bayo, i-greige isebenzela uninzi lwemiqolomba yamadoda nokuba inokubekwa umva okanye isesikweni. Ukwenza iphalethi yanamhlanje kumqolomba wendoda yakho, dibanisa iindonga zegrisi kunye neorenji kunye namalahle. Ngelixa ufuna ulusu olusemthethweni ngakumbi kumqolomba wendoda yakho, zama ukuyizalisa ngomthunzi othulisiweyo we-accents eluhlaza kunye ne-taupe.
Kulungiselelwe abo basebenza kunye uyilo lomqolomba omncinci , kungcono ukuhamba ngombala okhanyayo ongathathi hlangothi njengegrisi. I-Greige ibisoloko ithatha umphunga kwindawo yoyilo lwangaphakathi, isenza umbala oqhelekileyo kumagumbi asendlwini kwaye eyona nto iphambili kukuba inezinto ezifanayo nakweyiphi na ukungathathi hlangothi, kodwa inika umoya opholileyo kunye nopholisayo.
Kude kube nini ngaphambi komtshato ukuthumela izimemo
yeyiphi isandla esenza umsesane wesithembiso uqhubeke